मात्रिका यादवको प्रश्न : हामीलाई यस्तो मोजमस्ती छ, कसले पार्टी फुटाउँछ ?::Point Nepal
मात्रिका यादवको प्रश्न : हामीलाई यस्तो मो.जमस्ती छ, कसले पार्टी फु.टाउँछ ?
काठमाडौं, स´त्तारूढ दल नेपाल क´म्युनिष्ट पार्टी (ने´कपा) का स्थायी क´मिटी सदस्य, सांसद तथा पूर्वमन्त्री मात्रिका यादवले पार्टीभित्र विधि र वि´धानलाई नेताहरुले फलो नगरेको टि´प्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो ने´टवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेकपा कसैले पनि नफु´टाउने दा´बी गरे । उनले भने,‘यस्तो मोजमस्ती छ हामीलाई, क्रा´न्ति गर्नुछ र हामीलाई ? म चाहीँ अब क्रा´न्तिकारी छैन् ।’ उनले आफूहरुले गरेको जनयु´द्धले केही उपलब्धि भएन ? भन्नु ग´लत हुने बताए । उनले भने,‘जनयु´द्धकै बलमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो । धेरै उपलब्धि भएका छन् । समानूपातिक प्रतिनिधि´त्व भएको छ । केही भएन भन्न मिल्दैन् । जुन प्रकारले अघि बढ्नुपर्ने थियो । त्यसरी अघि बढेको छैन् ।’
उनले तपाईहरुको पार्टी किन एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सकेन ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘सुरुमा पार्टी एकता गर्ने बेलामा पनि प्रचण्डसँग भनेको थिएँ कि यो ठिक भएको छैन् । विचारमा स्पष्ट नभईकन एकता गनुृहुँदैन थियो भनेर मैले भनेको थिएँ । एकता बचाउनको लागि हामी जे–जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिराखेका छौं । हामी एकतावि´रोधी होईन् । सही र ग´लतको बीचमा बहस चलाउने हो ।’
उनले नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने धारणा राखे । रअ प्रमुखसँग प्रचण्डले भेटेको भन्ने समाचारमा उनले आ´पत्ति जनाए । उनले भने,‘उहाँहरु भेट्नुभएको होईन । कसरी भेटे भन्नेबारे विज्ञहरुलाई सोध्नुहोला । रअ प्रमुख प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आएको भए त लुकेर आउने थिएनन नि ?’ पर्सामा नेकपाका मुकेश चौरसियाको श´ब किन उठेन ? कि´टान जाहेरी किन दर्ता भएन ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘हिजो पनि हामी छलफल गर्यौं । त्यो घ´ट्ना नियोजित हो । प्रहरी प्रशासनको पनि सहयोग देखिन्छ । मुकेश चौरसियाको श´ब नउठ्नुमा प्रशासन सिधै अगाडि छ । पछाडि को को छ ? त्यो खो´जतलास गर्ने विषय हो । नत्र केश किन द´र्ता हुँदैन् ? यो पार्टीको लागि, यो कसको सरकार हो ? बुझि नसक्नुहुन्छ ।’
अनि शब उठाउन ढिला भयो नि, तपाईहरुको योजना के छ ? भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले थपे,‘घ´ट्ना घटेको आज ८ दिन भैसक्यो । हामी श´ब उठाउँछौं । पहिला केश दर्ता गर्नुपर्छ । पो´ष्टमार्टम हुनुपर्छ । जाहेरी किटानी लिनुपर्छ भनेर ३७ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले जा´हेरी दर्ताको माग गरेका छौं ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कि´टानी जाहेरी लिन्छु भनेको भएपनि मन्त्री थापाभन्दा माथिकोले नगर भनेर जोहरी दर्ता नगरेको होला भन्ने उनको धारणा छ । उनले भने,‘सायद प्रधानमन्त्रीको द´बाबमा गृहमन्त्री पर्नुभयो । पार्टीको कार्यकर्ताको ह´त्या हुन्छ ? अनि जाहेरी दर्ता हुँदैन् । भिड्न जानुपर्ने हो । हामीले फेरि छाती थाप्नुपर्यो । देशका साथीहरुलाई भन्छु । फिल्डमा आएर बुझ्नुहोस । सिडिओले भनिरहेको छ दर्ता गरौं भनेर । तर, किन भएको छैन ?’
उनले स्थायी कमिटीको म्याण्डेट प्रधानमन्त्रीले लत्याउनुभयो भनेर नेकपाका नेताहरुले भनेका छन् नि ? भनेर राखेको अर्को जिज्ञासामा उनले भने,‘म स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डाको समर्थक थिईँन । स्थायी कमिटकिो प्रस्तावमा मेरो विमति थियो । कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने कुरा त्यो उहाँहरुलाई सोध्नुहोस् । केही मान्छेहरु बस्ने छलफल गर्ने अनि टालटुल पार्ने हिँड्ने ग´लत हो । विधि र प्रक्रियाअनुसार पार्टी चलेको छैन् । व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थहरुबीच टकराव भैरहेको छ । प्रचण्डले पनि केही गर्न सक्नुभएन भन्ने होईन । दुवै अध्यक्षले गरिरहेका छन् । आ–आफ्नो ढंग र विचारअनुसार हिँडिरहेका छन् ।’